Jeesjeex si loogu isticmaalo naqshadaha iyo astaamaha kala duwan | Abuurista khadka tooska ah
Jeesjeesyada aad ayey faa'iido u leeyihiin markay muujinayaan mashaariicdeena iyo naqshadeynta qaab asal ah oo hal abuur leh inkasta oo taasi ay ku xirnaan doonto xirfadeena, hadana ficil ahaan loo adeegsaday astaamaha.
1 Sidee ayay astaan ​​u tahay inay ahaato?
2 Laakiin maxay yihiin jeesjees runtii?
3 Bacda kubad jees jees
4 Jees jees Magazine
5 Dhalo jees jees ah
Sidee ayay astaan ​​u tahay inay ahaato?
Astaan waa inay noqotaa mid badan iyo inkasta oo loogu talagalay taageero gaar ah, waa in loo diyaar garoobaa haddiiba ay muuqato waqti lama filaan ah.
hay ilaha soo noqnoqda ee qaabka ku dara Marka ay timaado wadaagista, waa wax caadi ah in la arko ilo bilaash ah ama kumbuyuutarka, laakiin sidoo kale waxaa jira kuwa kale oo aan sidaa u sahlanayn in la helo, sidaa darteed ma jiraan waxyaabo badan oo kala duwan, maaddaama loogu talagalay taageerooyin aan inta badan la isticmaalin.
Kheyraadkaas waad ku isticmaali kartaa mashruucaaga, laakiin haddii kale, weli waad badbaadin kartaa maadaama aadan ogeyn goorta aad isticmaali karto. Kuwa hoos lagu xusi doono waxaa lagu soo dejisan karaa bilaash waana fududahay in la isticmaalo.
Laakiin maxay yihiin jeesjees runtii?
Kuwa aan aqoon majaajillo ayaa noo oggolaanaysa inaan wax yar ka fikirno sida astaanta ama naqshaddu u ekaan doonto in aad rabto inaad isticmaasho, waa sawirro alaabooyin kala duwan ah oo loogu talagalay in lagu dhejiyo naqshadeena, iyadoo lagu hagaajinayo habka aan dooneyno inay ku noqoto nolosha dhabta ah. Tani noo ogolaanayaa inaan aragno qaladaadka oo aad sameysid xoogaa isbeddel ah oo midab ama cabir ah, iyadoo kuxiran waxa aad rabto inaad gaarto. Sidoo kale qalabkan waxaa loo isticmaalaa in lagu tuso macaamiisha wax soo saarka la bixiyo.
Bacda kubad jees jees
Este faa iido badan ayey yeelan kartaa iyadoon loo eegin goobta aad ku sugan tahay, laakiin haddii aad inta badan ku shaqeysid bacaha dharka, tani waa tan adiga kugu habboon. Sidoo kale Waxay noqon kartaa caawimaad inaad aragto sida astaantaadu u egtahay sidoo kale waxaad u habeyn kartaa boorsada naftaada madadaalo.
Nooc kale ayaa ah majaladda majaajillo, Tani waa mid waxtar badan u leh dadka leh mashaariicda tifaftirka, in kastoo ay tahay inaad la qabsato oo aad hesho mid matali kara waxa runta ah ee hadhi doona marka mashruuca la dhammeeyo, oo ah waxa ugu badan ee lagula talin karo in la sameeyo ayaa ah midka kuugu habboon waxa aad rabto.
Dhalo jees jees ah
Waxaa soo badanaya shirkadaha tixgelinaya naqshadaha lagu dari karo dhalooyinka, gaar ahaan kuwa loogu talagalay khamriga, maaddaama muraayaddu tahay meel waxtar badan leh oo calaamadda la adeegsanaayo ay tahay in had iyo jeer lagu xisaabtamo. Marar badan way adkaan kartaa in la qiyaaso natiijada dhamaadka, maxaa yeelay quraaraddu waxay ku guuleysan kartaa farqiga cufnaanta calaamaddu leedahay, laakiin jeesjeeskaan gaarka ah wuxuu kuu oggolaanayaa inaad aragto muunad yar kahor daabacaadda.
Sida aan u fiirsan karnay kuwan jees jeesku wax weyn ayey tari karaan dhammaan dadka ka shaqeeya nashqadda, gaar ahaan astaamaha iyo sumadaha, maadaama ay noo oggolaanayaan inaan yeelano fikrad yar oo ah sida alaabteena ugu dambeysa ay u ekaan doonto, sida calaamadeena u ahaan doonto dushaas.
Tani wax badan ayey inaga caawin kartaa annaga iyo macaamiisheenna maxaa yeelay waxaan iska ilaalin doonaa khaladaadka iyo kharashyada aan loo baahnayn maadaama waqtiga intiisa badan faahfaahintaan la arko marka la sameynayo daabacaad dhameystiran, iyadoo la arkaayo in badeecada aysan shaqeyneyn, taasi waa sababta ay shirkado badan u arkeen baahida loo qabo in la isticmaalo jeesjeeska si fikrad yar looga qabto shaqada taasi waa sameeyey.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Qaar ka mid ah jeesjeesyada waxtarka leh si loo siiyo hal-abuurnimo badan naqshadahaaga
Aad u xiiso badan, kaliya laga bilaabo adduunkan naqshadeynta.
Jooji ka fikirida arjiga oo bilow sawiridda khibrada
Fududeynta qaabeynta bogagga shabakadda